White agwa na mbara agwa stew na tomato | Bezzia
White agwa na sara mbara agwa stew na tomato
Maria onyekwere | 06/06/2021 10:00 | Akwụkwọ nri
Anyị ejirila ohere nke ịdị jụụ nke ugwu kwadebe ezigbo nkasi obi, stew nke agwa ọcha na agwa sara mbara na tomato. Ọ bụ ezie na oge agwa gafere, anyị ka nwere ụfọdụ na nchekwa ma anyị achọghị ịhapụ ha.
Stew a dị mfe, n'agbanyeghị ogologo ndepụta nke ihe ndị mejupụtara. Ọ bụkwa na anyị etinyela n’ime ya a osisi na-emetụ n'ahụ site na ngwa nri dị iche iche na otu akụkụ nke mmiri ara ehi oyibo. Ọ bụrụ na ị gaghị anwa anwa jiri ihe ndị a ma ọ bụ na ịnweghị ha, ị nwere ike dochie ihe ndị ahụ na-esi ísì ụtọ na ndị ọzọ na-amasị gị na mmiri oyibo na otu ego nke efere.
Enwere ike itinye ọgwụ ọtụtụ n'agbanyeghị, doro anya, ozugbo emere nke a, nsonaazụ ga-enwe obere ma ọ bụ ihe ọ bụla metụtara ihe anyị nwetara. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga-anọgide na a ezigbo efere iji wuchaa gị kwa izu menu. Dare nwetụla ịnwa ya?
1 Efrata maka 2-3
Efrata maka 2-3
1 galiki, mebiri
3 chara acha pear tomato, peeled na bee
1/2 ngaji nke cumin
1 ngaji nke Garam Masala
1 njuputa nke agwa sara mbara
Iko iko mmiri 2 ma ọ bụ ofe akwukwo nri
1 iko mmiri oyibo
1 ite nke agwa ọcha
Tinye ngaji mmanụ abụọ n’ime ite mmiri na sauté yabasị n’elu ọkụ na garlic maka nkeji 10.
Emechaa tinye tomato ma sie nri ruo mgbe ọ malitere ịda. Nwere ike inyere ya aka site n’ichegharị ma ghaa tomato.
Ozugbo tomato dị nro, tinye ngwa nri, agwa na mmiri, mix ma esi nri maka 5 ọzọ nkeji na ọkara okpomọkụ na pan kpuchie.
Na-esote, hichaa agwa ndị ahụ n'okpuru mmiri oyi na-agbakwunye ha na casserole. tinyere mmiri oyibo. Gwakọta ma sie nri maka nkeji ise ọzọ iji mee ka ekpomeekpo gwakọta.
Na-eje ozi na-acha ọcha agwa na nke sara mbara agwa na tomato, na-ekpo ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ntụziaka » Akwụkwọ nri » White agwa na sara mbara agwa stew na tomato
Otu esi achọta ma nọrọ na mkpali